एनआई सी एशिया बैंकको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणका अधिकांश परिसूचक उत्साहजनक | suryakhabar.com
Home आर्थिक एनआई सी एशिया बैंकको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणका अधिकांश परिसूचक उत्साहजनक
काठमाडौँ । एनआई सी एशिया बैंकले चालु आ.व. २०७/७६ को तेस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरणका परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहजनक रहेका छन् । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा १ सय ४८ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ अर्ब २२ करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी खुदमुनाफातर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा १ सय ४५ प्रतिशत अर्बको वृद्धि सहित २ अर्ब २७ करोड खुदमुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको खुदमुनाफा ९३ करोड रहेको थियो ।
बैंकले यस आर्थिक वर्षमा ३३.५ प्रतिशतको वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ५० प्रतिशतको वृद्धि गरी वासलातको आकार २२८ अर्ब १९ करोड पु¥याउन सफल भएको छ । जस अन्तर्गत कर्जातर्फ यस आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशतको वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३७ प्रतिशतको वृद्धि गरीरु. १४९ अर्ब ५० करोड र निक्षेप संकलनतर्फ यस आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतको वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३३ प्रतिशतको वृद्धि गरी १७८ अर्ब ९ करोड पु¥याउन सफल भएको छ । यसरी निक्षेप तथा कर्जामा यस बैंक अन्य सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक भन्दा शिर्ष स्थानमा रहेको छ । बैंकको वार्षिक विन्दुगत आधारमा प्रतिशेयर आय १ सय २४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३४.७१ तथा स्व पूँजीमा प्रतिफल ९० प्रतिशतले वृद्धि गरी २१.४६ प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ ।
बैंकलाई आमजनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुक भर २८३ शाखा कार्यालय, २८९ एटिएम, ४१ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २६ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ । हालसम्म यस बैंकमा ग्राहकको संख्या करिब १६ लाख रहेको छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले परिपालना गर्दै आएको छ ।